Ucinga ukuba, ukuze uhlambe iintaba ezingcolileyo, uya kuba neeklasi ezimbini zamanzi? Ngendlela, umzimba ufuna amanzi okwaneleyo ukwenza zonke iinkqubo eziyimfuneko zobomi. Ukuba awuyidli imali oyifunayo ngemini, ke zonke ukutya ezicutshungulwayo ziya kususwa emzimbeni ngendlela egciniweyo, ekhokelela kumnandi kumzimba kunye nokuphefumula. Ukusetyenziswa kwamanzi amancinci kubangela ukubonakala kwemibhoshongo yokuqala, ukulahleka kwethenda yesikhumba, iinwele ezinqabileyo. Okumangalisa kukuba, abaninzi abantu basela ezinye iziphuzo kunye nangaphezulu kwamanzi.
Umzimba womntu ungama-90% amanzi. Sisebenzisa amanzi nangaliphi na uhlobo, kodwa khumbula ukuba itiye, ikhofi, i-juices ziyi-LIQUIDS, ngelixa umzimba udinga amanzi. Iziphuzo ezininzi zibangele ukucima i-gastric juice secretion, iilisi ezahlukeneyo kunye nezigulana zingakhuthaza i-mucosa yesisu, iinjongo kufuneka zisuswe. Amanzi acocekileyo anako ukusombulula zonke ezi ngxaki. Ayinalo iikhalori, akukho zilondolozo kunye namabala ebalawuli kuyo.
Ndingawasela ngamanzi amaninzi?
Ngomhla umntu ulahlekelwa ngamaglasi e-10-12. Ukuze wenze ilahleko, kuyimfuneko ukusela malunga ne-2-2.5 ilitha amanzi ngosuku. Xa kukho ukulahleka kwamanzi, umntu uqala ukugula aze agugile. Inkqubo ye-circulatory, urinary kunye ne-system ye-nervous ihlupheka. Ukuqokelela i-slag kunye ne-toxins, ukutshabalalisa imeko jikelele yempilo yethu. Ukutshintshisiswa kwamanzi-electrolytes, okukhokelela kwiimeko ezahlukeneyo zomzimba.
Makube ujwayele ukusela umlinganiselo ofanelekileyo wamanzi. Kufana nokuhlamba umzimba, ukuhlamba isisu kunye namathumbu, ukulungiselela ukuba usebenze. Naliphi na umfazi owaziyo ukuba imeko yendlela yokugaya ichaphazela, ngaphezu kwayo yonke, isikhumba. Amanzi - indawo ephilisa ubomi kwesikhumba sethu, kuba i-hydration efanelekileyo isiqinisekiso sobuhle kunye nokuthintela imibimbi yamandulo. Ukuba usela amanzi aneleyo kufuneka sibe nelixa elaneleyo, ngoko uya kulibala malunga neengxube zetekisi, ezonakalisa ubunzima bezinto zethu, kwaye uya kuhlala usemncinci kwaye ubuhle kangangoko kunokwenzeka. Ngentsasa, ngokukhawuleza xa uvuka, uphuze iglasi yamanzi. Ngokukhawuleza kunika umqondiso kumzimba malunga nokuqala kosuku olutsha. Ungalibali ukusela amanzi ngeglasi nganye ngeyure.
Luhlobo luni lwamanzi endiyisebenzisayo?
Sisoloko siva kwiindawo ezininzi zokungcola kwamanzi ngamanzi anzima, iicroticides, izichumisi. Akumangalisi ukuba abanye abantu bayesaba ukusela amanzi okupompo. Bazama ukuyitshintsha ngamanzi amaninzi kwiibhotile zeplastiki, amanzi amaminerali, njl njl. Ukuba uhlala kwindawo apho amanzi ahlambulukanga khona, kucetyiswa ukuba uthenge inkqubo yokucoca ifakwe kwisakhelo, kufuphi ne-sink. Ukuba sithetha nge-chlorine, ke mayeke amanzi ahlale kwindawo ethile ngaphandle kwesiqhekeza, ukwenzela ukuba i-chlorine iya kuphazamiseka. Indlela eyaziwayo kakhulu yokuhlambulula amanzi kukuyilisa. Ngokubhekiselele kumanzi amabhodlela, izazinzulu zenze ukuba amathuba okusinda kwezilwanyana ezinjalo kwiimeko ezinjalo, ngoko kukho isabelo sengozi apha. Ngoko ke, ukuba ukwesaba ukusela amanzi ompompo, gca yonke i-zai.
Ingqungquthela kukuba ininzi yeengozi zempilo ayisongeli ukusetyenziswa kwamanzi, kodwa isuka kwimali enganeleyo. Amanzi anika iinkqubo eziqhelekileyo zokucoca umzimba kwaye ahlambulule umzimba. Ngoko, oku kukuthintela ngakumbi kuzo zonke izifo, iresiphi engcono kakhulu yobuhle nolutsha.
Iimpawu ezisetyenziswayo zeswekile
Ukusetyenziswa kweziqholo kwishishini lokutya
Imveliso yemvelo yindlela ephilileyo kwimimiselo
Iimveli zeziqholo ezilungileyo
Umhlahlandlela wokusela ngokufanelekileyo itiye
Abantwana abaselula kwiintsapho ezinkulu
Biography ka Megan Fox